Created By : 03-Sep-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 185
မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall ဦးဆောင် သောအဖွဲ့အား ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၀:၃၀)နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
Created By : 03-Sep-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 206
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ဂျာမနီနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke.Wenzel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၄:၀၀)နာရီမှ (၁၄:၃၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
Created By : 03-Sep-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 170
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ (KPK) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၀:၄၅)နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Created By : 03-Sep-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 166
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (KPK) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Laode Muhammad Syarif ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၀:၃၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
Showing9to 12 of 148 (37 Pages)